Tetikasa - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Anaran'ny tetikasa ： Tetikasa fampitana herinaratra 110 kV sy fanovàn'ny Shabao Agricultural Photovoltaic Station any Nayong County
Adress ： tanàna BiJie, YunNan
Faritra havoana -110kV 2020.09
Ny fananganana vaovao ny tsipika 110kV avy any Quxian Xicheng mankany Langya, Wire: JL / G1A-300 / 40-24 / 7 vy fototra tariby vita amin'ny aluminium, tariby ambanin'ny tany: JLB20A-80, OPGW-24B1-80. Ny halavan'ny tsipika dia 29km, ny tilikambo vy vy dia toby 90, ny lanjan'ny Toatl dia 550 taonina. Natao sonia ny volana septambra 2020 ny didy mandra-pahatongan'ny volana oktobra 2020, ary 35 andro ny tsingerina. Nampiharina tamin'ny fomba mahazatra tamin'ny voalohan'ny Desambra 2020.
Faritra havoana - 220kV 2020.6
Huarun Yuexi Sigan Baozu 84MW Wind Power Project 220kV tetikasa tsipika tokana, tariby: JL / G1A-300 / 40-24 / 7, tariby ambanin'ny tany: OPGW-24B1-80. Ny halavan'ny tsipika dia 19.35KM, tontalin'ny tilikambo vy misy zoro dia 45 set, Ny lanjany manontolo dia 680 taonina. Nosoniavina tamin'ny Mey 2020 ny didy handefasana amin'ny Jona 2020, ary 25 andro ny fotoana famokarana. Hatao amin'ny fomba mahazatra amin'ny voalohan'ny volana novambra 2020 izy io.
Faritra havoana -35kV 2020.5
Ho an'ny tetik'asa fanamboarana vaovao manomboka amin'ny 110kV Wumu Station ka hatrany Longyanjing 35kV ao Suining, Sichuan, ny tariby dia mandray an'i JL / G1A-300/25 ary ny tariby ambanin'ny tany dia mandray ny OPGW-24B1-50. Ny halavan'ny tsipika dia 9.5KM, ny tilikambo vy sy ny tsato-by fantsom-by dia base 30, ny lanjany dia 260 taonina. Nosoniavina ny volana aprily 2020 ny lamina handefasana amin'ny Mey 2020, ary 25 andro ny tsingerina. Nampiasaina ara-dalàna tamin'ny volana aogositra 2020 izy io.
Faritra avoavo 110kV 2020.1
Tetikasa tsipika boribory tokana natsangana tao Wangda ~ Bitu 110kV, tanànan'ny Zuogong, Tibet, mpitaingina JL / G1A-185 / 35-26 / 7 tsipika GJ-70, ny halavan'ny tsipika dia 126KM. tilikambo dia 311 napetraka, 3150 taonina ny lanjany. Naharitra 90 andro taorian'ny nanasoniavana ilay didy tamin'ny volana oktobra 2019 hatramin'ny fahavitan'ny fanaterana ny tilikambo tamin'ny Janoary 2020, ary ny andalana iray manontolo dia napetraka tamin'ny Aogositra 2020.
Faritra ankapobeny –220kV 2019.12
Faritra ankapobeny: Mongolia, fananganana vaovao tadivavarana 110k tadivavarana amin'ny lafiny mpampiasa Mongolia tetikasa. Tariby ： JL / G1A-240/30. Tariby mihodina: OPGW-24B1-80. Ny halavan'ny tsipika dia 11km, habetsaky ny halavany: tilikambo vy zoro dia 35 napetraka. Milanja tanteraka: 483 taonina. Vita sonia ny volana septambra 2019 ny didy, ary 22 andro ny fotoana famokarana. Nampiharina tamin'ny fomba mahazatra tamin'ny voalohan'ny martsa 2020.